Real Madrid Oo Wadahadalo Kula Jirta Saxiixa Franck Kessie
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo wadahadalo kula jirta saxiixa Franck Kessie
January 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dayayso in ay si degdeg ah ula wareegto xiddiga khadka dhexe ee kooxda Ac Milan ee Franck Kessie .
Inkastoo uu yahay ciyaaryahan muhiim ah San Siro, Kessie ayaa u muuqda mid sii kordheysa oo ay u badan tahay inuu ka tago kooxda reer Talyaani xagaaga iyadoo wax ka yar lix bilood ay ka harsan tahay qandaraaskiisa.
Iyadoo Milan ay u badan tahay inay sii wadi doonto dadaalkeeda ay ku dooneyso inay ku tijaabiso xiddiga heerka caalami ee dalka Ivory Coast inuu qalinka ku duugo heshiis cusub, kooxo badan ayaa doonaya inay la soo wareegaan 25 jirkaan.
Sida laga soo xigtay El Nacional , Real Madrid ayaa dooneysa inay ku guuleysato tartanka loogu jiro saxiixiisa, waxaana ay diyaar u yihiin inay sida ugu dhaqsaha badan u sameeyaan heshiiska.
Warbixinta ayaa soo jeedineysa in madaxda Real ay doonayaan inay xaqiijiyaan in Kessie uusan u saxiixin kooxda ay xifaaltamaan La Liga ee Barcelona , halka kooxaha sida Tottenham Hotspur , Manchester United iyo Arsenal sidoo kale la sheegay inay isha ku hayaan xaalada .